Domestic Tour Operator - Vacation at Home in Ghana
Easy Track Ghana	Aha ne wokwan a wode bedi afofida....
Ɛdiɛn Afofida Na wo hwehwɛ?
Sɛ ɛyɛ wo sɛɛ aburokyire nkoaa na wobɛtume agye wahome anaa akwamma ama ayɛyie a sesa w'adwen ɛsan sɛɛ ɔman Ghana wɔ nnepa pii a womfa w'ani kosua nhunu da. Anigye sɛm ne sɛɛ yɛ wɔ adwumafoɔ a w'aben wɔ nsrahwɛ adwuma mu a wobɛtumi ama wonsa aka nea wahwere nyinaa
Easy Track Ghana Yɛ Ghana dehyeɛ bi adwuma a neti fri Ghana na oboa akwantufoɔ wɔ wakwantu sɛm mu,sɛ ɛyɛ ɔman Ghana anaa Togo. Yakyini saa aman mienu yi atifi akɔpim anaafoɔ akɔ nsrahwɛ adwuma biara mu a yebɛtumi adi wanim ama wakɔhwɛ baabiara wopɛ na ɛsan yɛ anika a wobɛtumi akɔdi afɔfida ma ayɛyie na wonnu woho. Easy Track Ghana yɛma wo nea wopɛ esan sɛ yɛte wo kasa ase yie.
Yɛ wɔ gyedie wɔ ɔman Ghana mu,yɛ wɔ gyidie se Ghana yɛ bia sronko, yɛ san gyedie sɛ yɛbɛtumi aboa ama yakyekyere ɔman Ghana ama abɛyɛ oman pa wɔ abre a yerebɔ yɛn sika ho ban wo fie. Afei dwene ho sɛɛ wobɛdi wafofi da ene wo home da biara wɔ Ghana ɛfiri sɛɛ yɛ wɔ akwantuo ho nhyeyepa ma Ghanafoɔ nkoaa.
Yɛnim sɛ Ghanafoɔ yɛ adwuma den dabiara. Ɛnti onua sɛ wasie sika sɛ wo de bɛkɔ ahome gyeɛ a ɛwɔ bia fofro bia a dwene ho bio ɛfiri sɛ nkrofo kuo pii wiase afanaa nyinaa ba yen asoeye saa sompa yiara na yɛpɛ sɛ yɛde bi som yen nnuanom Ghanafoɔ wɔ ɔman yimu.
Yɛpɛsɛ wo nya ani gyeɛ sronko na watumi atu wayɔnkofoɔ fo ama won nso abɛsɔ ahwɛ
Sɛ wopɛ Nsem bi ho ano yie anaa nkitahodie biara free yen wo yen ahoma no so Telephone: 027 665 7036 Wobɛ hunu yen wo Achimota.
Nsɛm a ɛfiri ɔkwankyerefoɔ hɔ: "Ahomegye bea pii, aduane ɛyɛ de,bea a ɛfɛ, nneɛma eye anika, ɔsompa. Ɛyɛ nokware wei nom nyinaa wɔ Ghana man mu.Ghanafoɔ pii dwen sɛ won bɛ kɔ amanone akɔ di homeda. Nso ye ne saafoɔ yi nyɛ adwen ɛfirisɛ yakyini Ghana afanaa nyinaa ahunu sɛɛ yɛ wɔ nnepa wɔ ɔman yi mu. Ɛbi ne amanmere ne afahye ahodoɔ, me nua mmaa ne mmarima, awofoɔ, nsera hwɛ bea pii wɔ Ghana a yɛ bɛ tumi akɔ hwɛ, ɛnti wodwene nsrahwɛ akwantuo ho a dwene Ghana ɛfirisɛ ye wɔ nne pa pii." - Jessie